यस नवजात खुवाउने पछि Regurgitation - प्राकृतिक घटना हो। बच्चाहरु को पेट देखि यसरी अतिरिक्त हावा, र शरीर संकेत पाचन प्रक्रिया सामान्यतया बढ्नु छ बाहिर आउँछ। तर कहिले काँही यो एक pipsqueak जोडले खाना को एक ठूलो राशि, तपाईं खाए लगभग सबै regurgitates कि हुन्छ। यो घटना के हो र यसको कारण के हो? नवजात शिशुहरु मा Regurgitation फोहरा - यो लेखको विषय हो। यसलाई प्रदान जानकारी अध्ययन गरेपछि, तिमी किन यो यस्तै अवस्थामा आमाबाबुले लिन बच्चा, र के कार्यहरू संग हुन्छ सिक्न छौँ।
अनुचित रुचाउने grudnichka
कारण नम्बर 1, त्यहाँ शिशुहरू एक फोहरा regurgitation छ मा - स्तन गर्न बच्चा लागू प्रविधी उल्लङ्घनको। हरेक आमा खुवाउने एक बच्चा निपल grasps जस्तै यो हेर्नुपर्छ समयमा। आफ्नो मुख सबै areola, बस छैन स्तन को टिप प्राप्त गर्नुपर्छ। टोंटी बच्चा, सास फेर्न पर्छ खुलेर अन्यथा यो सधैं निपल र मुख सास फेर्न गर्न उत्पादन हुनेछ। र यो ventricle crumbs अतिरिक्त हावा प्रवेश कारण छ। त्यो हावा अत्यधिक regurgitation ट्रिगर। कृत्रिम रुचाउने आवश्यक छ जब बोतल लागि सही निपल चयन गर्न। यो नरम लोचदार हुनुपर्छ, आमाको निपल को आकार निम्नानुसार। रुचाउने पछि, बच्चा, "स्तम्भ", अझै अतिरिक्त हावा बाहिर आएको छैन पकड। तर के आमा ठीक स्तन गर्न बच्चालाई राख्दछ भने, र दूध को ठूलो रकम उल्टी को अवस्थामा पटक-पटक गर्दै हुनुहुन्छ? हामी कारणहरू खोज्न जारी।
नवजात शिशुहरु मा Regurgitation फोहरा। बारेमा डा Komorowski के भन्छ?
प्रिय बाल विशेषज्ञ बच्चाहरु गर्न आमाबाबुले यस्तो अवस्थामा आतंक, र एक बच्चा एक रुचाउने मा खाने धेरै खाना कसरी ध्यान सल्लाह दिएको छ। नवजात शिशुहरु पूर्ण महसुस गर्छन् र त्यसैले तिनीहरूले दिन धेरै खान सक्छ। यस कारण, बच्चा, परिणाम संग overeat सक्छ
त्यहाँ शिशुहरू एक फोहरा regurgitation छ। कारण स्पष्ट छन्? मेरो आमा पहिले नै पूर्ण भनेर टुकडा कसरी थाह? अर्को रुचाउने बच्चा समयमा सामान्य भन्दा अलि पहिले छाती देखि excommunicated थियो। आफ्नो प्रतिक्रिया हेर, उहाँले srygnet कति पक्का हुन। हाँ बच्चा capricious र रो हुने छैन। तर बच्चा overfed छैन, र एकदम अक्सर हुन पेट देखि प्रशस्त दूध उपज को अवस्थामा भने यो एक राम्रो कारण हुन सक्छ। नवजात शिशुहरु मा Regurgitation फोहरा गम्भीर रोगहरु बाट हुन सक्छन्। हामी बारे थप कुरा गर्नेछौं।
कारण पेट ऐंठन शिशुहरू मा हुन सक्छ अपच (तितरबितर)। यो पनि crumbs उपयुक्त खाना छैनन् भने घटना, ती अवस्थामा हुन्छ। नियम, यो बोतल-खुवाउनुभयो जो बच्चाहरु लागू हुन्छ। दूध गुणस्तर, वा मिश्रण ध्यान, तपाईंले आफ्नो बच्चा दिनुहोस्। आफ्नो डाक्टर संग परामर्श र अरूलाई तिनीहरूलाई विस्थापन गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
संक्रामक रोग पनि शिशुहरू मा profuse उल्टी हुन सक्छ। यस मामला मा, सही निदान र उपचार मात्र एक विशेषज्ञ नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ।
माथिको समस्या तर ऐंठन र उल्टी अक्सर छन् आफ्नो बच्चाहरु केही छैन भने तपाईं के गर्नुहुन्छ? कारण अरू के हुन सक्छ? नवजात शिशुहरु मा Regurgitation फोहरा कारण पाचन प्रणाली विकास रोगहरु गर्न उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। कारण आंत्र बाधा, हुन सक्छ diaphragmatic हर्निया, एक पेट असामान्यता। तर यी निदान अत्यन्तै दुर्लभ हो, र तिनीहरूले सर्वेक्षण मात्र पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। surgically यस्तो विकृति व्यवहार गर्छन्।
अचाक्ली जाने छैन र एक नवजात copiously spits यदि नआत्तिनुहोस्: म सबै जवान आमा र बाबु चेतावनी चाहन्छ। सबै को पहिलो आफ्नो स्वास्थ्य निश्चित गर्नुहोस्। यदि crumbs आराम दिने सुत्न, नियमित आंत्र आन्दोलनहरु र urination, यो सक्रिय wakefulness समयमा, सामान्य वजन प्राप्त छ - यी आफ्नो बच्चाहरु स्वस्थ छ भनेर संकेत हो। र उल्टी बारेमा, एक बाल विशेषज्ञ परामर्श र आफ्नो बच्चाहरु सबै सही छ कि निश्चित गर्नुहोस्।
के उमेर मा एक बच्चा एक केरा, स्याउ, तरकारी सकिन्छ
बच्चालाई कसरी breastfeed गर्न?
बीचमा समूहमा छोराछोरीको gymnastic अवकाश
के तपाईं गालहरूमा घडीहरू के मतलब हुनुहुन्छ थाहा छ?
कुञ्जीपाटीमा रोमन अंकहरू: जहाँ भेट्टाउन सकिन्छ?
को विकर्ण मनिटर के हुन्? काम र घर को लागि के आकार मनिटर
दाँत को फ्लोरिडेशन - यो के हो? दाँत को गहिरो फ्लोरिडेशन को प्रक्रिया कस्तो छ?
"Methandrostenolone": दबाइ, को संरचना को प्रयोगको लागि निर्देशन
Crochet टाँसन: योजना वा विवरण?
रगतको प्रकारले उत्पादनहरू छनौट गर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो तरिका: जस पिउन के
कसरी अमेरिका जान वा अमेरिकी नागरिक कसरी बन्न